Jamaal Khashoggi: Wariye Sacuudiga u dhashay, marna saaxib la ahaa Bin Laden, oo lagu la’ yahay Istanbul – Madal Furan
Hoy > Warka > Jamaal Khashoggi: Wariye Sacuudiga u dhashay, marna saaxib la ahaa Bin Laden, oo lagu la’ yahay Istanbul
Madal Furan – Suxufi caan ah oo Sacuudiga u dhashay, laguna yaqaanno inuu aad wax uga sheego siyaasadaha dalkiisa, ayaa la la’ yahay ka dib markii uu booqday qunsuliyad uu Sacuudigu ku leeyahay Turkiga.
Khashoggi wuxuu u tegey halkaas inuu “warqado buuxbuuxiyo” ayuu warhaysku yiri, wixii markaas ka dambeeyeyna warkiisa lama maqlin.
“Ma garanayno in la xiray, ama su’aalo la weydiinayo ama goorta la sii deyn doono” ayuu mar kale wargayska.
Taliyayaasha Militariga Sacuudiga oo la badalay
Waxaa kale oo la ogsoon yahay in uu xiriir aad u dhow la lahaa Cusaama Bil Laden, kaasoo uu wakhtiyo badan ula safray Afganistan, sannadihii 19080-meeyadii, intii uu Soofiyeetku dalkaas ku jiray, walow uu markii dambe si cad u diiday fikradihii Bin Laden, ayna kala hareen muddo dheer ka hor weerarradii 2001 lagu qaaday Maraykanka.
Madaxweyne Gaas oo ruqseeyey Sarkaakiil ka tirsan ciidamada Booliska iyo sababta ka danbeysa
Kenya oo qaaday tallaabo kale oo Soomaalida ay kaga careysiineyso.
Iran:Roxaani oo cunaqabateynta Mareykanka ku tilmaamay dagaal maskaxeed